Olan’ny boxe : “Tsy fitiavana ahy”, hoy i Gégé Bosco | NewsMada
Olan’ny boxe : “Tsy fitiavana ahy”, hoy i Gégé Bosco
Namaly ny faneren’ny Komity olympika malagasy (Kom), amin’ny hanalana azy amin’ny toerana maha filoha lefitry ny federasiona malagasin’ny ady totohondry azy, Andriamanampisoa Gégé Bosco. “Tsy fitiavana ahy fotsiny ary fanaovana halako bika, tsy tiako tarehy ity fanapahan-kevitry noraisin’ny Kom, tany Toliara, ity”, hoy izy. Notsiahiviny fa tsy misy olona afaka manala azy, amin’io toerana io, afa-tsy ireo ligim-paritra
nametraka azy, tamin’ny alalan’ny fivoriambe, ihany. Araka izany, mitsipaka marindrano io fanambarana navoakan’ny Kom io ny tenany.
Efa nisy taratasy nosoniavin’ny filohan’ny federasiona Rabarisoa Hery Mamy, nandritra ny fivoriambe tsy ara-potoan’ny federasiona farany teo, fa tsy hanala ny filoha lefitra mihitsy ny federasiona, tarihiny. Nanamafy i Gégé Bosco fa tsy misy rafitra avy any ivelany, afaka miditra amin’ny raharaha tokantranon’ny fanatanjahantena malagasy.
“Efa nisy ny fitapitaka natao tamiko ny taona 2014, nanakanana ahy tsy hilatsaka ho filohan’ny federasiona, nefa noho ny fitiavako ity taranja ity manokana, dia nandefitra nanana ny rariny aho tamin’izany”, araka ny nolazain’i Gégé Bosco. Nomarihiny fa nihatsara ny vokatra azon’ny ady totohondry malagasy, hatramin’ny niverenany tao anatin’ny federasiona. Anisan’ireny, ny tany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, natao tany Congo-Brazzaville, ka nahazoana ny tapakila, tokony niatrehana ny ho fiadiana ny ho tompondaka tany Alemaina. “Vokatr’izay, tsy mba nanampian’izany Kom izany, na ny minisiteran’ny Fanatanjahantena. Ny mampalahelo, lasa toerana fankahalana olona fotsiny ny Kom”, hoy i Gégé Bosco.